Abebebambe iqhaza esithangamini sokuxhumana ngobuchwepheshe (kusukela kwesobunxele, ngenhla) nguDkt Tlaleng Mofokeng, uNks Lisa Vetten, uNks Ali Shongwe (kusukela kwesobunxele, ngezansi) uDkt Angeline Stephens, uNks Janine Hicks, noSolwazi Relebohile Moletsane.
IKolishi lezesiNtu libambe isithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe, phecelezi i-webinar, kudingidwa isihloko esithi Understanding and Responding to Gender-Based Violence (GBV) during COVID-19 and Beyond: New Strategies for New Times.
Kulesi sithangami bekukhona uKhomishana weKhomishini Yokulingana Ngokobulili uDkt Tlaleng Mofokeng, uNks Lisa Vetten wase-University of the Witwatersrand, nabamele i-UKZN izishabasheki sezabafundi nezobulili uNks Ali Shongwe, uDkt Angeline Stephens, uNks Janine Hicks, noSolwazi Relebohile Moletsane obenguSihlalo walesi sithangami.
Isithangami sibheke ukudlanga kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngaphansi kwesimo semvalelwandlini ye-COVID-19 - okungukuvalwa kwezindawo zokusebenza, umthetho wewashi nemigomo eqinile – ukuthi kuyithinta kanjani imindeni nemiphakathi kanjalo namasu nezindlela zokuqinisa ukusebenzisana, ukuxhumana nokwesekwa kwabantu namaqembu.
Siphinde sabheka ‘ukuthi abathintekayo bangenzani ukuqinisekisa ukuthi ukudlanga kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane akushaywa indiva ngoba kujahwe ukuthi kubuyelwe emsebenzini nasesikoleni’.
Ngaphezu kwaloko sibheke ukuthi iziphathimandla – okunguhulumeni nezikhungo ezinjenge-UKZN – kufanele zenzeni ukuqinisa imikhankaso yokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokubhekana nezinselelo ezintsha, zibe zibheka okufanele kwenziwe ngumuntu ngamunye – okuyizitshudeni, abasebenzi, abafundisi nabaphathi – empini yokulwa nalesi sihlava.
UMofokeng uthe: ‘Kumqoka ukuqinisekisa ukuthi labo abancinyane emphakathini ngokwezimo ezibabeka engcupheni njengokukhula, ezobulili, ezohlobo lwabantu abathandana nabo, ububha nokuthutha – kufanele bacatshangelwe, bangashiywa ngaphandle.’
Uqhubeke wathi izikhungo zemfundo ephakeme ziyizindawo ezimqoka lapho abantu abasha bekhula khona besuka ebunganeni beya ekubeni badala, lapho khona ezinye izinto ezenza bangachumi ku‘yindluzula, ukusebenzisa izidakamizwa, ukubandlulula abathandana nabobulili obufana nobabo, ukuzonda abantu abamnyama, ukwenyanya abantu besifazane nokuxosha izitshudeni ngoba zishoda ngemali'.
UMofokeng uthe iKhomishini yoKulwela Ukulingana Ngokobulili izoqhubeka nokusebenzela ukuletha uguquko ukuqinisekisa ukuthi labo abake bahlukunyezwa ngokobulili bayasizakala ngalesi sikhathi semvalelwandlini. ‘Uma abantu bengasizakali eziNkantolo zemiNdeni, iKhomishini yoKulwela Ukulingana Ngokobulili ingabamela abamangali. Lokhu kungenzeka kuphela ngezikhathi lapho umangali engakwazi ukusizakala ezinkantolo ngoba iziNkantolo Zendluzula eMndenini azenzelwanga ukusiza abamangali ngaphandle kosizo lommeli.’
U-Stephens uthe: ‘Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona nemigomo yomvalelwandlini kuqubule inkulumompikiswano endala ngokuhlukumeza nokuthi okwenzeka kumuntu kuxhumana kanjani nokwenzeka ezikhungweni zomphakathi.’
Ebuka ngeso lokulwela amalungelo abantu besifazane, ubheke ukuthi loku kungaba namuphi umthelela ngaphansi kwalesi simo ekhaya nasenyuvesi njengoba izitshudeni nabasebenzi beqala ukubuyela emagcekeni eNyuvesi. UNks u-Stephens uqhamuke neziphakamiso esinjengokuphucula izindlela zokubhekana nalesi simo ezigxile ekuvaleni igebe emkhankasweni wokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
UShongwe, oyisishabasheki samalungelo abantu besifazane, ubuze ukuthi yini eyenza ukuthi umkhankaso wokulwa nesihlava ube yimpumelelo, yiziphi izikhungo ezivukuziwe, yiziphi izinsiza ezibekiwe, kubekwe yiphi inqubo nemithetho nokuthola izindlela zokusinqanda nokuqhamuka nekhambi. ‘Unyaka wonke kusukela kwamenyezelwe ngokusemthethweni ukuthi ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane kuyinkinga ezweni lonke, uma kuqhathaniswa nokumenyezelwa kobhubhane lwe-COVID-19 njengesimo esibucayi ezweni kuveza ubuhlakanhlaka bokuqonda ukuthi kusho ukuthini kuhulumeni waseNingizimu Afrika ukuqhamuka ne‘khambi lenhlekelele’ noma ukuqonda ukuthi izinhlekelele azilingani.’
Ubalule ukuthi ‘njengokulwa nobandlululo emphakathini ocwasayo, kudingeka kuguquke ukwenza izinto ukuze kufezeke okuhloswe yinqubo yentando yeningi, lapho ukuhlukumeza abantu besifazane kunqinda ukuphuculwa kwezinga lempilo’.
Ngokuka-Vetten, i-COVID-19 nemigomo enzima edalwe imvalelwandlini yenza ukuthi abantu babheke indlela abathatha ngayo ezobulili nokuhlukumeza. U-Vetten ukhulume ngokudlanga kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngesikhathi semvalelwandlini kanjalo nokuqhamuka nesisombululo, wabalula nokushoda kwemininingwane yokubhekana nako. Loku ukuxhumanise nokuthula nokusonga izandla kwabantu, wabuza imibuzo emqoka njengokuthi umphakathi uyibuka kanjani indaba yokuhlukumeza, ukuthi kuthinta bani nokuthi yini ethathwa njengendlela efanele yokulungisa izinto, wanxusa ukuthi kube nophenyo oluqondene nale ndaba ukuxazulula lezi zinkinga.